Abagcagcelwe bangahle babe ngoFata – Bayede News
Abagcagcelwe bangahle babe ngoFata
UPapa uFrancis kuleli sonto uvule ingqungquthela
UPapa uFrancis kuleli sonto uvule ingqungquthela ezothatha amasonto amathathu eVatican lapho kudingidwa khona izihloko ezihlukene ezihlanganisa nokuthi amadoda ashadile angamaKhatholika avunyelwe ukuba ngoFata. Lo mhlangano uzobheka nesimo semvelo nezithinta inkolo esifundeni i-Amazon.
Udaba olushisa ibunzi nokubhekwe ukuba luthathe isikhathi eside ludingidwa ngolokubheka ukuthi amadoda ashadile avunyelwe ukuba ngoFata ukuze kuqedwe ukuntuleka kwabo ezindaweni ezisemakhaya e-Amazon.
Uma lesi siphakamiso siphumelela kuzoba ngokokuqala ukuthi kumaKhatholika kuguqulwe umthetho osuthathwa njengesiko lokuthi abahola ibandla kube yizimpohlo. Kukhona iqembu elingahambisani nalo mbono phakathi kwalo okukhona uCardinal uRaymond Burke wase-United States of America (USA) noBishop u-Athanasius Schneider waseKazakhstan asebenxuse ukuthi kuthandazwe ngokungenamkhawulo futhi kuzilwe ukudla izinsuku ezingama-40 zale ngqungquthela.
Kukhona abathi lolu daba ngeke lube bucayi ngendlela abaningi abasaba ngayo. UCardinal uMarc Ouellet waseCanada uthi umanqikanqika akazazi ukuthi umiphi ngalesi siphakamiso.
“Anginaso isiqiniseko, ngicabanga ukuthi akumina kuphela okulesi simo. Kukhona umuntu ongaphezulu kwami omanqikanqika kakhulu ophakamise ukuthi ivulwe inkundla ludingidwe udaba,” kusho uCardinal u-Ouellet egudla iguma uPapa uFrancis.
Akubona kuphela labo abathathwa njengabanamakhanda aqinile ebandleni abaphikisana nalo mbono. Kusuka kuvulwe le ngqungquthela kunamaqembu abesifazane okuhlanganisa nezindela ababhikishayo ngaphambi kwaseVatican abathi bafuna ukuvunyelwa ukuba babeke izwi labo nabo bakwazi ukuvota ngalesi siphakamiso.
Bali-185 abesilisa okuhlanganisa abefundisi nasobaba okubhekeke ukuba babeke uvo lwabo ngevoti kulesi siphakamiso. Abesifazane abangama-35 bazovunyelwa ukubamba iqhaza kule ngqungquthela iningi labo okuyizindela kodwa abanikiwe ilungelo lokuvota.
Lo mhlangano uzoba ngovalelekile okungangokuba abezindaba batshelwe ukuthi kuzokhulunywa nabo emuva kokuphothulwa kwazo zonke izinhlelo sebenikwa izinqumo ezithathiwe.
Labo abanelungelo lokuvota banikwe ithuba lokukhuluma imizuzu eyishumi bebeka uvo lwabo ngezihloko ezihlukene ezidingidiwe. Kule mizuzu eyishumi izikhulumi zidomswe ngendlebe ukuthi zingaphumi esihlokweni nakuhlaka lomhlangano.
Okusohlelweni lomhlangano kubizwa gegama lesiLatin elithi “Instrumentum Laboris,” noma “Usomqulu Osebenzayo,” oqukethe amaphuzu ali-147 ahlanganiswe aba ngusomqulu wokugcina wengqungquthela okuyiwo ozovotelwa ekupheleni kwayo.
Iphuzu le-129 kulolu hlelo luqukethe isiphakamiso esithi “amathuba okuthi abaphristi bagcotshwe kubhekisiswe kabanzi futhi kubhekwe ngakubantu abadala, ikakhulukazi abawumsinsi wokuzimilela, abahlinishwayo futhi bamukelwe umphakathi abahleli nawo. Okunye okukhona ephuzwini le-129 iqhaza labesifazane.
Zonke iziphakamiso ezizokwenziwa kule ngqungquthela zizothunyelwa kuPapa azicubungule kubhekwe ukuthi kuzona azikho yini ezizoguqulwa zibe yimithetho yebandla.